Ny malaza ao amin’ny tontolon’ny bilaogy Saodiana (mandritra ny Eid,…) · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 15 Novambra 2018 8:04 GMT
Fotoana hialana voly ny Eid, fotoana iray amin'ny taona izay mifandray amin'ny hasambarana sy fifalian'ny olona. Na dia izany aza, ho an'ny bilaogera Saodiana sasany, somary tsy mitovy izany Eid izany. Ohatra, Nzingha tsy nifaly, ary mihevitra fa ny Eid dia “matetika manelingelina.” Mandritra izany, Riyadhawi nanapa-kevitra ny handrava ny fomban-drazana Eid amin'ny tsy fandraisana anjara amin'ny fivorian'ny fianakaviana, satria misy havany ara-pivavahana hamono izay karazana fahafinaretana mety ho azony. Ao ihany koa i Mansour, izay ketraka loatra, ary namaritra ny Eid ho toy ny Eid “manirery, lalana tsy azo andehanana, ary fankalazana tsy misy ifandraisany amiko”, milaza ny zava-misy fa voafetra amin'ny fianakaviana ny ankamaroan'ny hetsika amin'ny fankalazana ny Eid ao Arabia Saodita, ary tsy azo avela hiditra ny lehilahy tokatena.
Tsy dia mahazo aina amin'ny faneriterena toy izany ireo lehilahy Saodiana tanora. Araka ny voalazan'i Majoudi, ireo fepetra ireo dia mahatonga ny olona marobe hahatsapa fa hahilikiliky ny fiarahamonina sy tsy raisina izy ireo, ka mahatonga azy ireo hahatsiaro tsy mahazo aina miaraka amin'ny fiarahamonin'izy ireo manokana. Na dia izany aza, mety tsy tian'ny hafa ny fanokafana varavarana ho an'ireo zazalahy, tahaka an'i ubergirl78, izay mihevitra fa adala ny lehilahy Saodiana. Manome antony marobe amin'ny fehin-keviny izy, anisan'izany ny fiara firimorimoana lafo vidy eny eny an-dalambe, sy ny tsy fanajana ny ankizivavy Saodiana indrindra indrindra. Angamba ny zavatra ilaina hamahana olana toy izany dia ny fitoviana; “fitoviana amin'ny ambaratonga rehetra, amin'ny toerana rehetra no zavatra ilain'izao tontolo izao,” hoy ny Random Saudi .
Amin'ny raharaha iray hafa, Abu Sinan, bilaogera amerikana nanambady vehivavy Saodiana, nanontany ny tena mombamomba ilay bilaogera Saodiana malaza The Religious Policeman. Ho an'i Abu Sinan, toa ny fanavaozana ao Arabia Saodita no zavatra farany ao an-tsain'ny The Religious Policeman, ary na dia “liana amin'ny fanovàna aza izy dia miditra amin'izany amin'ny fomba DISO”. Mihevitra i Abu Sinan fa mety tsy Saodiana izy, ary niantso azy ho “hosoka” mihitsy aza.
Farany, ireto misy fantina kisendrasendra sy vetivety avy amin'ny tontolon'ny bilaogy Saodiana: Ruba, iray amin'ireo bilaogera tanora indrindra, dia tena feminista, ary manome tsiny ny lehilahy Saodiana amin'izany. Izany koa no nitarika azy hieritreritra ny hanoratra boky miaraka amin'ny namany iray. Mirary soa amin'izany! Mandritra izany, Rimyoleta manao ny lisitr'ireo lahatsoratra bilaogy 30 tsara indrindra. Fouad al-Farhan miresaka momba ny fitsidihany tanàna kely iray teo amoron'ny Ranomasina Mena. Tsy nankalaza ny faha-25 taonany i Catch-22, ary manana antony lehibe tsy nanaovany izany izy. Riyadhawi miresaka momba ny andian-tanara mampiadihevitra “Al-Hour Al-Ayen”, ary milaza fa tsy voamarina ny tsy fanaharan-dalàna momba izany, ary i Abu Joori indray miresaka momba ny zava-bita kelin'ny zotra-piaramanidina nasionaly Saodiana.